Akhriso Halis Aad U Weyn Oo Laga Qaado Fadhiga Badan Ee Aad U Fadhiisato Internet, Game, Tv, I.W.M | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Akhriso Halis Aad U Weyn Oo Laga Qaado Fadhiga Badan Ee Aad U Fadhiisato Internet, Game, Tv, I.W.M
Published: August 23, 2014, 12:00 am
Bani aadanku wakhtiyo badan ayuu soo maray, laakin marna muu soo marin wakhti uu marxaladan uga fadhiisi badan yahay. Fadhigaa badan waxa u sabab ah technology-ga cusub ee maalinba maalinka ka danbeeya soo baxa. TV, internet, game(playstation), gaadhi, xafiis, iyo waxyaabo kale oo badan ayaa nolool maalmeedkeena ku qasba in fadhi ku dhamaysano.
Daraasado badan ayaa lagu arkay inu fadhiga badani keenayo halisyo aad u fara badan dhinaca caafimaadka oo ka mid ah wadno xanuun, naaxitaan, dhiig kar, macaan, IWM. Daraasad ayaa sheegtay qofka laba afar saacadood iyo wax ka badan fadhiya inu 50% uga halis badan yahay inumootul qaflah u dhinto, iyo inu 65% uga halis badan yahay inu ku dhaco wadno xanuun.
Hadaba haday nolasheeno keenayso inaynu mudo dheer fadhino maxaa xal ah? Samee qodobadan hoos ku qoron si aad uga badbaadid dhibaatoyinkan iyo dhibaatoyin kale:
1. Fadhiga ku jimicso. Marka 30 daqiiqo laga soo wareego adoo fadhiya isyar dhaqaaji oo iskala bixi.
2. In mudo ah markaad fadhidid kac oo yar socosoco.
3. Kursiga si sax ah ugu fadhiiso. Jidhkaaga intiisa sare iyo lugahaagu waa inay isku sameeyaan xagal 90 ah.
4. Labaatankii daqiiqo fiiri oo eeg meesha ugu fog aad eegi kartid in mudo 20 ilbiriqsi ah si aanad u dhaawacin indhahaaga.
Dumarku Waxeey Ku Nastaan Ninka Aay Agtiisa Ka Helaan Arimahaan Hoose.